जनसंख्याको बीचमा साधारण पाचन प्रणालीको pathologies। साधारण रोगहरु भाटा सम्बन्धित। आफ्नो विशेषताहरु के के हुन्?
रोग यसलाई अम्लीय पेट सामग्रीहरू संग लगातार सम्पर्क कारण छ जो esophagus, एक पुरानो सुनिंनु छ। साधारणतया गैस्ट्रिक रस को प्रवेश देखि esophagus जोगाउँछ तल्लो esophageal स्फिन्क्टर को विफलता, सँग सम्बन्धित विकृति।
तीव्र biliary भाटा gastritis
यो फारम खाना bolus को संरचना मा bile गर्न जोखिम को एक परिणाम रूपमा श्लेम लाग्एको झिल्ली मा तीव्र सुनिंनु को विकास द्वारा विशेषता छ। तीव्र gastritis धेरै भिन्न भिन्न:
Esogastritis मुख्य प्रकटीकरण थोरै hyperemia र पेट पर्खाल सुनिंनु छ। यो thickens र बाक्लो खकार को एक पत्र ढाकिएको। को श्लेम लाग्एको झिल्ली सानो petechial hemorrhages र क्षरण एक छ।
Fibrinous gastritis, एक पर्खाल wherein गठन उपकला necrosis क्षेत्र fibrinopurulent purulent exudate घुसपैठ। यो घटना को प्रकटीकरण - को mucosa को प्रभावित क्षेत्रको सतह मा fibrin पातलो फिलिम। बाहिरको gastritis फिल्म को looseness विशेषता, र यो छ जब गहिरो सुनिंनु epithelium संग फ्यूज।
अन्य बाहेक wherein उपकला mucosa तहहरू असर gastritis, Necrotizing। necrosis अन्तर्गत आक्रामक कारक को प्रभाव अन्तर्गत सेल मृत्यु बुझ्छु।
Purulent gastritis - सुनिंनु को सबै भन्दा गंभीर रूप। प्रक्रिया को छेदों एउटा खतरा poses जो पेट, सबै तहहरू समावेश हुन सक्छ। यो embodiment को प्रकटीकरण - exudate को उपस्थिति, तर पनि तीव्र घुसपैठ mucosal leukocytes।
पुरानो biliary भाटा gastritis
यस प्रकारको भडकाऊ र degenerative घटना संयोजन गरेर विशेषता छ। पेट मा नियमित प्रवेश bile र अग्नाशय इन्जाइमहरु पुरानो सुनिंनु को विकास गर्न जान्छ। साथै, यो फारम तीव्र gastritis नतिजा हुन सक्छ। को mucosa मा alkalinity को फलस्वरूप जो यो edematous र erythematous बनाउँछ histamine, को मात्रा वृद्धि।
पेट, आफ्नो antrum र duodenum बीच "gatekeeper" भनिन्थ्यो जो एक स्फिन्क्टर, छ। थप पाचन र पोषक को पछि अवशोषण लागि आन्द्रा मा यो मांसपेशी निर्देशित सार्नुहोस् chyme (bolus) पेट बाट काम। को स्फिन्क्टर को अवरोध उपचार जो को लागूपदार्थ र आहार को संयोजन आवश्यक biliary भाटा, gastritis, विकास हुनेछ के गर्न सक्छ। असामयिक जसद्वारा खाना को एक गांठ जो पेट मा फिर्ता कलेजो उत्पादित bile मिलती, को स्फिन्क्टर को उद्घाटन यो रोग परिणाममा। संरचना bile यसको mucosa को राज्य मा एक हानिकारक प्रभाव छ। यो लवण, एसिड समावेश गर्दछ र इन्जाइमहरु आक्रमण कारक उल्लेख छन्।
को gatekeeper - biliary भाटा gastritis को कारण ले स्फिन्क्टर एक इनकार सम्बन्धित। यो गर्न जठरांत्रिय पर्चा को motility असर कुनै पनि शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप हुन सक्छ। पनि etiologic कारक बीचमा यस्तो hepatitis, पुरानो cholecystitis र duodenitis रूपमा रोगहरु पहिचान गर्न सकिन्छ। को स्फिन्क्टर को मांसपेशिहरु को कमजोरी र intestines मा दबाव वृद्धि अक्सर gastritis को कारण हो, र यो जठरांत्रिय पर्चा को pathologies एक नम्बर सक्छ। कारक predisposing को महत्वपूर्ण भूमिका। उदाहरणका लागि, स्थिर तनाव mucosal सुरक्षा गुण कम छ, र यो कमजोर कार्य irritants resists। एउटै लागू गैर-steroidal विरोधी भडकाऊ दबाइहरु gastritis धेरै पटक जोखिम वृद्धि। यी औषधिहरू prostaglandin संश्लेषण असर, र तिनीहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य प्रदर्शन - goblet कक्षहरू, को mucosa को बाधा गुण बढ्छ जो खकार को गठन प्रोत्साहित गर्न। विरोधी भडकाऊ दबाइहरु इन्जाइम cyclooxygenase बाधित र जसबाट prostaglandin को राशि, र खकार को यसैले रकम कम गर्छ।
भाटा esophagitis, परिणामस्वरूप ascites को पेट कसना pyloroduodenal प्वाल बढेको दबाव परिणामस्वरूप को गठन गरेर। थप कारक गरीब आहार, बलियोसँग वस्त्र, दबाइ, तनाव र धूम्रपान बनाउन सक्छ। यो घटना त यो विकृति सँग सम्बन्धित छैन, गर्भावस्था को समयमा उत्पन्न हुन सक्छ।
Biliary भाटा gastritis र भाटा esophagitis: लक्षण
भाटा esophagitis को मुख्य लक्षण सामान्यतया भोजन पछि उत्पन्न जो ईर्ष्या र एसिड eructation, हो, र जब अगाडि ढल्केको। यो पूरक को epigastric क्षेत्रमा एक बेचैनी छ।
धनी क्लिनिक biliary भाटा gastritis अलग छ। यो रोग को लक्षण दुखाइ र अन्य विकारहरु समावेश गर्नुहोस्। अक्सर विरामीहरु पूर्णतामा र सुनिंनु को भावना, साथै खुलारूपमा चिन्तित epigastric। दुखाइ सामान्यतया खाली पेट, र आफ्नो तीव्रता फरक हुन सक्छ - aching गम्भीर तीव्र देखि। अक्सर त्यहाँ उल्टी छ।
biliary भाटा gastritis को निदान विशेष अनुसन्धान र anamnesis पूरा गरेपछि बाहिर छ। केही उजुरी तिनीहरूले मात्र रोग को विकास मान मदत, पर्याप्त छैनन्। सबै को पहिलो, रोगी जहाँ विशेषज्ञहरु अदृश रक्त पत्ता लगाउन मलको, को वितरण गर्न निर्देशित छ। पनि अवश्य रोगग्रस्त foci पत्ता लगाउन, नेत्रहीन को श्लेम लाग्एको झिल्ली को राज्य आकलन गर्न मद्दत गर्छ कि EGD सञ्चालन गर्न छ। को duodenum मा दबाव वृद्धि manometry द्वारा निर्धारण गर्न सकिँदैन।
भाटा esophagitis भिन्नता एजेन्ट प्रयोग advantageously radiographic विधि निदान। यो विधि तपाईं esophagus मा पेट सामग्रीहरूको कास्टिंग को समय ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ। यो पनि पूरा गर्न सिफारिस गरिएको छ एन्डोस्कोपी, को mucosa अवस्था आकलन र थप अध्ययनको लागि जैविक सामाग्री लिन हुनेछ जुन।
Biliary भाटा gastritis र भाटा esophagitis तत्काल उपचार आवश्यक छ। यो बिरामीको अवस्था सुधार गर्न मद्दत र सम्भव जटिलताहरू जोगिन हुनेछ। esophagitis को खोज मा खराब बानी, साथै पेट क्षेत्रमा तीव्र व्यायाम त्याग्न पर्छ।
औषधि उपचार को नियुक्ति मा आधारित छ antacids को esophageal mucosa मा गैस्ट्रिक रस को आक्रामक प्रभाव कम छ। तिनीहरूलाई बीच "Almagel", "Maalox" दर लागू छन्। तिनीहरूले पेट र कम अम्लता को पर्खालहरु envelop।
साथै, यो गैस्ट्रिक रस ( "omeprazole") को secretion कम कि लागूपदार्थ प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। Prokinetics एसिड को कास्टिंग को सुरक्षा छ जो स्फिन्क्टर, को टोन सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। "Motilium" यस्तो लागूपदार्थ र "Motilak" बीचमा भेद गर्न सक्नुहुन्छ। यदि रूढिवादी उपचार असफल भएमा, सर्जरी endoscopic उपकरण को मद्दतले बाहिर छ, जो, आवश्यक हुन सक्छ।
biliary भाटा gastritis जस्ता रोगहरु को उपचार कस्तो छ? लक्षण र यो रोग को उपचार inextricably लिङ्क छन्। विरामीहरु जटिल pharmacological र गैर-दबाइ उपाय, अवस्था सुधार हुनेछ जो नैदानिक manifestations को हटाउनु आवश्यक छ। खराब बानी, उचित पोषण अप दिने - सबै को पहिलो यो जीवन पत्र गर्न आवश्यक छ। बीचमा औषधीय तयारी सामान्यतया histamine रिसेप्टर ब्लकरहरू को secretion कम जो काम तोकिएको छ। तिनीहरूले श्लेम लाग्एको झिल्ली घाउ को निको गति - बिना Gastroprotectives के छैन। यसबाहेक, यो आवश्यक बाध्यकारी छ bile एसिड, ursodeoxycholic एसिड प्रयोग गर्छ। यस्तो "Domperidone" र "metoclopramide" को रूपमा लागूपदार्थ मदत गर्न पेट मा chyme भन्दा सुरक्षित।
biliary भाटा gastritis को गठन रोक्न र उचित पोषण र रोग प्रक्रियाहरू को समसामयिक निदान गर्न मद्दत esophagitis। यो आचरण नियमित endoscopic एक प्रारम्भिक चरण मा रोग पहिचान गर्न मद्दत गर्नेछ जो परीक्षा, रोक्न सिफारिस गरिएको छ। यो सर्जरी र गंभीर जटिलताओं को घटना बच्न रूढिवादी उपचार को प्रभावकारिता वृद्धि हुनेछ।
यसबाहेक, यो mucosa को बाधा गुण सुधार गर्नुपर्छ। यसलाई खराब बानी दिन (वा न्यूनतम तिनीहरूलाई कम), स्वस्थ खाद्य पदार्थ खान र तनावपूर्ण परिस्थिति जोगिन प्रयास सिफारिस गरिएको छ।
पनि predisposing कारक, परिणामस्वरूप mucosa कमजोर बन्नेछ पेट मा खकार उत्पादन कम जो nonsteroidal विरोधी-भडकाऊ लागूऔषधको बारम्बार प्रयोग हो। महत्वपूर्ण भूमिका रोकथाम र concomitant रोगहरु को प्रारम्भिक उपचार द्वारा प्ले।
यी सर्तहरू रोगी को स्थिति worsen सक्छ, जस्तै तर पनि जटिलताहरू पैदा biliary भाटा gastritis र esophagitis को घटना को समस्या, सान्दर्भिक छ। समयमै निदान समयमा सुरु गर्न उपचार गर्न अनुमति दिन्छ।
Miliums हटाउँदै: समीक्षा। को कारण
Idiopathic पल्मोनरी फाइब्रोसिस - उपचार र सिफारिसहरू
को काँध ब्लेड र कसरी स्थानीयमा बीच अप्रिय दुखाइ।
सेतो ज्वरो एक बच्चा मा: कारण, लक्षण, उपचार
एक बच्चा मा संक्रामक mononucleosis: लक्षण र उपचार
छोराछोरीको रगत वृद्धि eosinophils द्वारा प्रमाणित?
Rostovka साइकल: तालिका। Rostovka साइकल फ्रेम
होटल पूंजी कोस्ट Resort र स्पा4* (साइप्रस, पेपहस): फोटो र समीक्षा
Antiviral दबाइ "Valtrex": प्रयोगको लागि निर्देशन
यस परी-कथा शैली मा आफ्नो हात संग किंडरगार्टन मा लकर कोठा बनाउन
तेर्सो spacer: विवरण
सुन्दर र किफायती - को यार्न बलमा बनेको लेख
फ्राइज - आलु, सबै द्वारा प्रिय